Koi kaluunka Koi - Cudurka & hematite-ka leh hematite - fiidiyow
Koi kalluunka quartz kalluunka macnihiisu yahay iyo astaamaha madadaalada.
Ka iibso makhaayadaha kalluunka ee loo yaqaan "quartz kaluun dabiici ah"
Quartz kalluunka Koi waa dhagax aad u yar. Casaan & casaan waa ka mid noqosho hematite. Midabka khafiifka ah ee ka kooban birta oo oksaydh noqday. Hematite iyo quartz badanaa waxaa laga helaa si gooni gooni ah, laakiin marar dhif ah ayaa la isla qaataa.
Hematite, sidoo kale loo yaqaan "haematite", waa maaddo bir ah oo caadi ah oo ay weheliso caano loo yaqaan 'Fe2O3' oo ku baahsan dhagxaanta iyo carrada. Hematite waxay ku samaysataa qaab kiristaalo ah iyada oo loo sii marayo nidaamka laambarka rhombohedral, waxayna leedahay qaab isku mid ah oo loo yaqaan 'ilmenite' iyo 'corundum'. Hematite iyo ilmenite waxay abuuraan xalka adag oo dhammaystiran heerkulka ka sarreeya 950 ° C.
Hematite waa midab madow oo bir ah ama bir-cawlan, bunni ilaa bunni-guduud, ama casaan. Waxaa loo qodayaa inay tahay macdanta ugu muhiimsan ee birta. Noocyada waxaa ka mid ah kalyaha kalluunka, maaddada martida ah, birta birta ah iyo xaddiga macdanta. In kasta oo qaababkani ay kala duwan yihiin, dhammaantood waxay leeyihiin qulqulka casaan-guduudan. Hematite way ka adag tahay bir saafi ah, laakiin aad bay u sii jilicsan tahay. Maghemite waa macdanta loo yaqaan hematite-iyo magnetite-oxide macdanta.
Cillada hematite ee Clay cabirkeedu wuxuu kaloo dhici karaa sidii macdanta labaad oo ay aasaastay hawlo hawo ah oo ciid ah, oo ay weheliso maadadaha kale ee birta ama 'oxygenhydroxides' sida goethite, ayaa mas'uul ka ah midabka guduudka badan ee kuleylka, qadiimka, ama haddii kale carradu aad u cufan.
Quartz kalluunka Koi waa macdan adag, macdan ah oo ka sameysan silikoon iyo atomyo oksijiin. Atamyadu waxay kuxiran yihiin qaab joogto ah oo ah SiO4 silicon oxygen tetrahedra, iyadoo ogsijiin kasta la wadaagayo inta udhaxeysa laba tetrahedra, iyadoo la siinayo guud ahaan qaacidada kiimikada ee SiO2. Quartz waa macdanta labaad ee ugu badan ee ku jirta qolofka qaaradda, ka dambeeya feldspar.
Koi kalluunka quartz kalluunka macnihiisu iyo faa'iidooyinka daaweynta bogsiinta kareemka
Quartz waxaa loo yaqaanaa daawo-yaqaanka wuxuuna yareyn doonaa tamar iyo fikir, iyo sidoo kale saameynta kirismaska ​​kale. Waxay nuugtaa, kaydisaa, sii deysaa oo nidaamisaa tamarta. Nadiifi Quartz Waxay tirtiraysaa tamarta taban ee dhammaan noocyada, ka takhalusidda shucaaca asalka, oo ay ku jiraan qiiqa korantada elektroonikada ama shucaaca batroolka. Waxay isku dheelitiraysaa oo dib u soo noolaysaa qorshayaasha jidheed, maskaxeed, shucuureed iyo tan ruuxiga ah. Nadiifiyaa oo kor u qaadaa xubnaha jirka iyo jirrooyinka khiyaanada waxayna u shaqeysaa sidii qof nafteyda u nadiifiya, kuna xiriiriya cabbirka jirka iyo maskaxda. Waxay xoojisaa awoodaha maskaxda. Waxay caawisaa feejignaanta waxayna furaysaa xusuusta. Wuxuu kiciyaa nidaamka difaaca wuxuuna jirka u keenaa isku dheelitirnaan.
Quiz kalluunka Koi oo ku hoos jira mikroskoob
Ku soo iibso quartz kalluunka dabiiciga ah dukaankeenna qaaliga ah